I-Simona-Uthando, aBantwana, uThando-ukubala usiya eBukumkanini
USimona-Uthando, abantwana, uthando
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona ngo-Okthobha 8, 2020:
Ndabona uMama, wayenxibe zonke ezimhlophe; entlokweni yakhe sasinesithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini kunye nesigqubuthelo esimnandi esineenkwenkwezi zegolide ezazisebenza njengengubo. Iinyawo zikaMama zazize kwaye ziphumle emhlabeni. Umama wayevule iingalo zakhe ebonisa ukuba wamkelekile kwaye ezandleni zakhe kwakukho iRosari eNgcwele ende eyenziwe ngokukhanya. Makabongwe uYesu Kristu.
Bantwana bam abathandekayo, ndiyabulela ngokungxamela olu bizo lwam: ukunibona apha kuyigcwalisa intliziyo yam luvuyo. Enkosi, bantwana, ndiyabulela ngento enindenzele yona; Ndiyanithanda, bantwana.
Bantwana bam, uThixo uBawo uzisa iibramble ezininzi kuye apho akhupha khona iirosi ezintle. Khumbula, bantwana, ugqirha unceda abagulayo, hayi abagulayo. Bantwana bam, nabani na ofuna ukuba ngowokuqala abe ngowokugqibela, nabani na ofuna ukuba mkhulu makabe ngumkhonzi wabantakwabo noodadewabo, nabani na ofuna uthando makanike uthando, nabani na ofuna uxolo makabe ngumgcini woxolo, nabani na ofuna uvuyo funda ukunika uvuyo. Bantwana bam, yenzani kwabanye njengoko nifuna ukwenziwa kuni: thandani, kwaye musani ukuthiya, sikelelani, ningaqalekisi, gwebani, ningagxeki. Uthando, bantwana, thando: kungoko kuphela eniya kuthi nizaliswe ngamanzi ngoxolo lukaThixo. Kuxhomekeke kuni bantwana bam, kukuwe ukuba uthathe isigqibo malunga nobomi bakho. Ndifundisa indlela ekhokelela eNkosini, kukuwe ukuba uyilandele kwaye wamkele iimfundiso. Bantwana bam, sekulixesha elithile ngoku bendiza kuni ngenceba engapheliyo kaBawo: ndize kuniluleka, ndinithuthuzele, ndinibonise umnyango okhokelela kuBawo, ukuba ndininike uxolo, uthando, uvuyo. Ndiyanithanda, bantwana: landelani ikhondo elilungileyo-ukumamela kunye nokusebenzisa iimfundiso zam kukuwe wedwa. Ndiyanithanda, bantwana bam, ndiyanithanda. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama kum.
← UPedro - enegalelo kwi…
St Francis de Sales -… →